Global Voices teny Malagasy » Nahoana (ny tanora) no laharam-pahamehana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Mey 2018 5:07 GMT 1	 · Mpanoratra Antonella Figueroa Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Ny Tetikasa Reframed Stories dia mangataka amin'ny olona mba hamaly ireo lohahevitra manjaka amin'ny fitantaram-baovao miresaka azy ireo na lohahevitra misy fiantraikany amin'izy ireo. Ny tantara matetika dia mampifantoka ny fandinihan'ireo olona isoloan'ny hafa tena fa tsy avy amin-dry zareo ao amin'ny fampahalalam-baovao. Amin'ny alalan'ny famoronana zavon-teny mampiasa ny sehatra Media Cloud izay mikaroka angona media avy amin'ny faritra iray manokana eto izao tontolo izao, afaka nandinika sy nanadihady izany fisoloantena izany ireo mpandray anjara ary namaly avy amin'ity tantara nomerika ity. Ny tetikasa dia ahafahana manome sehatra hiandrandrana ny fomba ahafahan'izy ireo manome endrika ny fisolontenany amin'ny media amin'ny alàlan'ny media nomerika.
Antonella Figueroa dia mpikambana ao amin'ny Centro de juventudes de Esmeraldas  (Foiben'ny Tanoran'i Esmeraldas), fikambanan'ny zon'olombelona ao Esmeraldas, Ekoadoro izay miara-miasa amin'ny ankizy, ny tanora sy ny vondrom-piarahamonina LGBTI. Iray amin'ireo asany voalohany indrindra ny fandaharana isan-kerinandro amin'ny radio La Calle Habla  (Ny Resaky ny Lalana), toerana ho an'ny adihevitra sy resadresaka momba ny olana atrehin'ny fiarahamonin'izy ireo. Ity manaraka ity dia dikan-teny tamin'ny fandraketam-peo momba ny fanadihadian'i Antonella ny zavon-teny ho an'ny voambolana, “joven” (tanora).
Ireo teny manjaka avy amin'ny lahatsoratra 8.811 navoaka teo anelanelan'ny volana Janoary 2017 sy ny volana Aprily 2018 ary nahitana ny teny “joven” (tanora) tao anatin'ny angon'ny Media Cloud tamin'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny Espaniola tao Ekoadoro. (jereo akaiky kokoa ny sary )
Amin'ny zavon-teny nosafidiana, inona no nahasarika anao indrindra?
Nisafidy ny voambolana “tanora” aho satria isika no laharam-pahamehana. Na dia tsy ny olon-drehetra aza no manaiky izany, izany no zava-misy.
Ahoana ny hisehoan'ny tanora ao amin'ny haino aman-jery araka ny zavon-teny?
Lalana roa zotra, asa, fahafatesana. Zavatra betsaka momba ny loza izay nitranga satria angamba nisy ny vaovao momba ny loza, naratra, sy maty.
Ahoana no tokony hisoloan'ny tanora tena ao amin'ny haino aman-jery?
Tokony hisy voambolana maro hafa, tahaka ny hoavy, manintona, falifaly, mahatoky.
Ity dia ampahany amin'ny andian-dahatsoratra Rising Frames novolavolaina tamin'ny fiarahamiasa akaiky amin'ny fikambanana El Churo  ao Quito, Ekoadaoro. Nikarakara atrikasa natao ny 21 aprily 2018 izy ireo izay nampitambatra ireo solontena avy amin'ny fikambanana sy vondrona samihafa mba handinika ny lohahevitra lehibe amin'izy ireo sy ny tokony atao mba ho voasolotena amin'ny haino aman-jery Ekoadaoreana izy ireo ary hampijoro tantara ho setrin'izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/31/120354/